Mamwe matipi eLXDE | Kubva kuLinux
Mamwe matipi eLXDE
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Chitarisiko / Kuita munhu, GNU / Linux, Yakurudzirwa, Dzidziso / Mabhuku / Matipi
LXDE yakanaka Desktop Nzvimbo kuti sevazhinji vedu zvatinoziva, inotipa sehunhu hwayo hukuru, kushandiswa kwakanakisa kwezvishoma zvigadzirwa zvehardware izvo vamwe vedu vachiri nazvo.
Kunyangwe iri desktop richive richichinja zvishoma nezvishoma, kusanganisira ayo mashandisirwo uye ekugadzirisa maturusi, zvinogara zvichibatsira kuziva zvimwe zvinhu zvatingaite "neruoko" kana iwe usina mamiriro akakodzera.
1 Zvikumbiro pakutanga
2 Kugadzira menyu.
4 LXDM Fund.
5 Kuisa ndangariro muPCManFM
6 Yepasi rose Chirungu keyboard ine akafa makiyi.
LXDE Unoda isu kuti tiratidze kuti ndeapi maapplication kana iwe aunofanira kurodha kana iwe uchitanga chikamu, nekuti izvi zvinoshandisa generic faira iri mukati / etc / xdg / kukoshesa / / autostart.
Tora semuenzaniso iyo faira inouya mukati Linux Mint LXDE, iyo inofanira kunge iine zvinotevera:
Hatidi zvese izvi kakawanda, saka tinogona kuzvisiya nenzira iyi:
Neizvi tinodzivirira LXDE kurodha mamwe ekushandisa ekushandisa Linux mint izvo zvatisingazodi, kuwedzera kune iyo MAKARALI USB, the Network Manager, pakati pevamwe.
Tinogona kugadzirisa mamwe ma parameter kuti LXDE, kuigadzirisa zvishoma kune zvatinoda, muenzaniso wavo ndeyekugadzirisa menyu yemusangano yemushandisi kuitira kuti isaratidze zvimwe zvakanyorwa zvisingazoshandiswa, kana kusanganisira zvimwe.
Maitiro aya anoitwa nyore nyore ne LXDE, sezvo tichisanganisira chero chinhu chinopinda kumenyu, isu tinongofanirwa kugadzira .desktop mukati / usr / share / zvinoshandiswa / uye zvinobva zvangoiswa mumenyu. Saizvozvo, kana tichida, tinogona kubvisa zvimwe .desktop kuti hatidi kuti zvionekwe.
Isu tinogona zvakare kuigadzirisa pamurume, kugadzirisa faira rine zita rakajairika iro rakagadzirwa mukati mefaira .cache / mamenu /, semuenzaniso wezita refaira iri inogona kunge iri:
Imwe nzira ingave yekugadzirisa iyo faira /etc/xdg/menus/lxde-applications.menu kwataigona kubvisa chikamu mwe (Vamwe) somuenzaniso.
LXDE gadzirisa desktop ne PCManFM, rakanakisa faira maneja iro rinosanganisira matabhu uye ari nyore, nekukurumidza uye intuitive. PCManFM ndiye anotarisira kumisikidza Wallpaper yemushandisi, mifananidzo, pakati pezvimwe zvinhu.
Kana nekuda kwechimwe chikonzero iyo Wallpaper isina kuratidzwa, isu tinogona kushandisa unotevera kuraira kuti tiigone.
Kuisa, chokwadika, nzira iyo iyo mufananidzo uripo.
LXDE inosanganisira yayo yega musangano maneja inonzi LXDM. LXDM iri nyore uye inogadziriswa zvakanyanya. Mimwe yemisoro inowanikwa mu / usr / share / lxdm / themes / uye wozvigadzirisa kuti ugadzire yako.
Nekudaro, kana isu tichingoda chete kuchinja iyo yepashure mufananidzo, isu tinofanirwa kugadzirisa iyo faira /etc/lxdm/default.conf ndokusiya nenzira iyi:
Isu tinongofanirwa kushandura nzira yemufananidzo mune sarudzo BG uye tangazve LXDM.
Kuisa ndangariro muPCManFM
Imwe nguva yapfuura ndanga ndine mamwe matambudziko pandakaedza kuisa memory memory kana CD-ROM ndichishandisa
PCManFM. Uyu akanditorera a buda achiti: Kwete Mvumo.
Panyaya yematanda eUSB, mhinduro yandakatanga kuwana yaive inotevera:
1.- Gadzira mukati / hafu maforodha mazhinji ane zita usb, us1 uye zvichingodaro, zvinoenderana nenhamba ye USB ports.
2.- Sezvo nguva dzose chigadzirwa chekutanga chakaiswa pamwe sdb, Ndakawedzera kune iyo faira / etc / fstab mutsetse unotevera:
3.- Ipapo ndakaipa mvumo uye ndokuisa mushandisi mumubvunzo semuridzi weavo maforodha:
Asi sezvo iwe uchanzwisisa iyi nzira yakasviba zvishoma. Saka isu tine imwe mhinduro:
1.- Como mudzi isu tinogadzira iyo faira /etc/polkit-1/localauthority/50-local.d/55-myconf.pkla (kana
unogona kusarudza rimwe zita asi rinofanira kugara muna .pkla).
2.- Tinowedzera zvinotevera mukati:
3.- Ipapo isu tinowedzera mushandisi muboka STORAGE. Kana boka iri risipo, tinorigadzira:
Yepasi rose Chirungu keyboard ine akafa makiyi.
Kuisa iyo keyboard muChirungu nemakiyi akafa isu tinoshandisa uyu murairo, watinogona kuisa mu /etc/rc.local kana izvo zvisarudzo zvisina kuchengetedzwa patinotangidza PC zvakare:
Kunyanya, ini ndinogara ndichishandisa uyu musiyano nekuti echirungu kiyibodi inondibvumidza ini kushandisa iyo Ñ nekudzvanya makiyi [AltGr] + [N].
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Chitarisiko / Kuita munhu » Mamwe matipi eLXDE
Kunyanya ini ndinogara ndichishandisa uyu musiyano nekuti echirungu kiyibodi inonditendera kuti ndishandise iyo Ñ nekutsikirira [AltGr] + [N] makiyi.
Hauna makhibhodi muCuba ane in? Zvakanaka shit, nekuti tsamba dzese dzakakosha
Ah amai vangu, mukomana uyu ... Iwo makhibhodi ane Ñ ndiwo iwo echiSpanish. Pano keyboards akawanda anoshandiswa muChirungu zvakare.
Kana iwe uchitaura Spanish handizive kuti sei gehena raunotenga Chirungu, neSpanish iwe unogona kunyora mitauro miviri pasina kudikanwa kwemapfupi, neChirungu kwete carcamal
Zvese zvinhu zvinofanirwa kutsanangurwa kwauri? Ini handitenge iyo, inotengwa na "mumwe" kubva kuhurumende kunze kwenyika. Uye ndapota, ngatiregei kuita iyi gakava izvozvi, hazvina musoro sense
Huya, enda unochema kuna Kitty, iye chokwadi anokunyaradza iwe, ini handina zvakaipa pane izvo hahaha
Kunyora mavara se <> \_ | ¬ uye nevamwe, zvinonyanya kuomarara muSpanish (zvirinani kwandiri), uye isu tinoshandisa iwo mavara zvakanyanya mu bash, python kana kungori mune terminal.
I call that Spanishitis hahahahaha
kune makhibhodi muSpanish ane iwo makiyi », ¬, | »Senge idzo dzandakangonyora pasina matambudziko.
Ini ndinoda iyo keyboard muChirungu, ndiko kuti ... iyo "midiki mifananidzo" pamakiyi chero, asi nyora muChirungu saizvozvo, uye kana ndichishuvira zvakanaka Alt uye ndizvozvo.
Spanishitis, kana iwe ukatarisa zvandinotaura
Iwe zvakare unofanirwa kuita maaccent nemakiyi musanganiswa ini ndinofungidzira, handiti?
Kwete, ndinodzvanya ´] + [a] uye voila, ini ndine 🙂
Kunyangwe ini zvakare ndine mukana wekutsikirira [Alt] + [a] y = á 😀
Kuno kuBelgium dingindira rekhibhodi idambudziko, pachinzvimbo cheyakajairwa «qwerty» isu tine «azerty» ... zvakare, kuitira manhamba unofanirwa kudzvanya kiyi huru, uye nemavara makuru akatsimbirira makiyi ese ane basa rakasiyana. ((tisingataure enyes uye tildes) mhirizhonga yakazara !! asi hei, unojairira zvese ... kumba ndine laptop yandakauya nayo kubva kuSpain, uye kubasa iyo «azerty» keyboard uye ndinotopotsa ndavhiringidzika kumba pane kubasa hehehehe ndati, inyaya yekudzidzira netsika 🙂
Ndicho zera, ndosaka uchivhiringidzika
Ini ndinofanirwa "kurwa" neichi zuva rega rega!
tsime, Muvhuro kusvika Chishanu xDD
Iwo matipi anobatsira kwazvo, asi neLxde ini ndinoshandisa Wdm semaneja wechikamu nekuti iri nyore. Ini ndinoramba ndichikwidza zvishandiso zvangu negomo nekuda kwematambudziko andinayo nemagetsi mamaneja, zvinosiririsa kuti fd haina kuverengeka, zvikasadaro ingangove imwe yekupfuura kupfuura yatova.
Nesarudzo (yechipiri yeiyi positi) unogona kushandisa udisk kukwira ne:
kana iwe unogona zvakare kuseta sarudzo ye automount zvishandiso kana uchizviisa mu pcmanfm.
asi ndeapi matambudziko ane avo graphic mamaneja?
Nemazano aya zvakaitika kwandiri kuronga chimwe chinhu, kuti ndione zvinobuda.
Ivo vanogona zvakare kusanganisira iyo sarudzo yekupfura "Screenshot" iyo nekumisikidza yakaremara muOpenbox. Ini ndanga ndichitsvaga izvo painternet kuti ndione kana ndakaita mhando yeIptables yekumisikidza dzidziso paWebmin yeshamwari iri zvakare network network maneja uye ndakaona kuti openbox haina iyo nekutadza. Izvi ndizvo zvandakawana:
Kutanga tinoita script inotibvumidza isu kutora zvinyorwa, kune izvo zvine midzi yekuwana isu tinogadzira zvinyorwa zvedu mufaira / usr / local / bin nekodhi iyi:
chikwangwani chinenge "chisina njodzi" chingogadzira iyo skrini ine zita "skrini" ichiteverwa nezuva racho. Mushure mekuita iyo script mufaira tinoipa mvumo yekuita:
uyezve tinoita Openbox inomhanya iyo script pese patinorova iyo Printa kiyi. pane izvo isu tinovhura iyo Openbox yekumisikidza faira iri munzvimbo ~ / .config / openbox / lxde-rc.xml uye mukati meiyo faira tinotsvaga iyo «Keyboard» chikamu inova ndiyo inogadzirisa iyo keyboard uye ipapo tinowedzera sarudzo yekuita script nePrinta kiyi yekuti ivo vaise kodhi iyi imomo muchikamu icho:
Ipapo isu tinongofanirwa kugadzirisa bhokisi rakavhurika chete:
Ready…. uye maneja wedu weOpenbox anofanira kukwanisa kukwevera iwo ma skrini. Iyi ndiyo imwe yesarudzo dzandakawana kunyangwe iwe uchigona zvakare kutarisa iyo LXDE Wiki kuti uone zvimwe zvinhu
Ndine urombo asi handisi kuwana kwekugadzirisa zvinyorwa zvandaisa saka ndinongofanira kukumbira ruregerero uye ndozokuudza kuti kodhi yekuisa muchikamu chekibborad ndeichi:
…. ndine urombo kwaive kurasika kwepfungwa
José Daley Alarcón Rangel akadaro
Mhoroi, ndingaite sei theme iyo lubuntu login screen kana zvichibvira? Icho chaive chimwe chezvinhu zvandaifarira nezve Ubuntu 9,04. kana paine munhu anoziva kuti ndingaite sei kuisa madingindira pane yekupinda skrini ndinogona kuikoshesa
Pindura José Daley Alarcón Rangel
Yakawanda sei nhamo ne tsamba Ñ kana ñ uye echirungu kiyibhodhi? kana zvakaringana kutsanangura iyo khibhodi seSpanish panguva yekuisirwa.
Muchokwadi panguva ino ndinozviita kubva kuChirungu keyboard yakagadzirirwa seSpanish.
Zvakanaka, ini ndinoshandisa iyo US International musiyano nema Dead Keys pane yeChirungu keyboard uye ini ndinoisa ñ pamwe nekubatana AltGr + N
Mhoro, ndiregerere, mumwe munhu angandibatsire kuchinja iyo chena yekumashure kwePCmanFM yemufananidzo sezvaingaitwe naNautilus, ndatsvaga zvakanyanya paInternet asi handisati ndawana nzira, handizive kuti faira ripi rekugadzirisa . Ini ndinoshandisa Fedora 16 LXDE, ndatenda pamberi uye ndine hurombo nekukanganisa. Zvido.
Mhoroi, DEBIAN WHEEZY, gnome 3, pane mhinduro yekudzikisa zvese uye kwete kuvharira iyo system, kana iyo system yatanga patsva kana kuvharwa, ndeyekuisa umount -a, isati yabuda kana kupera kwemutsara wefaira. mu / etc / gdm3 / PsotSesion / default sezvaizoitwa muLXDE kana lingthdm.
gadza DEBIAN WHEEZY, ine LXDE nekumisikidza gadza ligthdm, kuigadzirisa isa gdm3, asi inoisa odhiyo server odhiyo odhiyo odhiyo, iyo yandisingade.
Pindura kune luchosystema
Ini ndoda kuisa yechinyakare mufananidzo muna lubuntu pakutanga, ini ndoda kugadzirisa iyo splash ... iwe ungazive sei? ndatenda
Maitiro ekudzima iyo mousepad uchinyora
HTC Imwe X, In-Kudzika Kuongorora